Teknolojiyadda-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Technology
Markaan u isticmaalno biyo culus si aan uguxeyno birta birta ka samaysan, waxaa badanaa jira barkad weld qurux badan. Markaan dhamayno alxamidda, waxaa jira iftiin haraaga ah oo hadhsan. Marka, waxaad u istcimaali kartaa “daahid” (function) inaad ku dheereysato waqtiga shaashada isbedelka uu ku soo noqonayo iftiinka.
U isticmaal TAW korantada jiifa, dhigay 5 ampere xasilloon hadda, oo waxaad ka dhigi kartaa dareenka ADF daciifnimo iyo is qab qabsi adoo kor u qaadaya “dareenka”, si aad u gaarto yoolka beddelka iftiinka.
Markaad alxamayso, hadaad rajaynayso inaad horumariso waxqabadka shaqada, waxaad samayn kartaa shaashadda beddelaysa inay si dhakhso leh iftiinka u hesho adigoo yaraanaya wakhtiga daahitaanka. Marka, waxaad iska hubin kartaa barta alxanka sida ugu dhaqsaha badan uguna diyaarso alxanka xiga.